Kọfị Tebụl kọfị - Ndị na-emepụta tebụl kọfị, ndị na-eweta ya
Tebụl kọfị na-ebuli elu na-enye anyị ihe dị oke ọnụ ahịa ma na-elegharakarị anya: obere nchekwa nchekwa ọzọ na-emekarị ihe dị iche. Ọ bụ otu n'ime ihe kpatara tebụl kọfị nwere shelf na cubbi dị n'ime ya na-ewu ewu ma nwee ekele.
Chekwaa ngwongwo gị n'anya ndị ọbịa gị mgbe ị na-enye ime ụlọ gị ebe obibi mara mma nke ga-eme ka ohere gị ghara ịkpa arụ. Site na tebụl kọfị anyị nwere ike ibuli elu, ihe ịchọ mma ime ụlọ gị agaghị abụ otu.
Ezubere maka onye pere mpe nke chọrọ nchekwa kachasị, tebụl kọfị a dị elu dị mma maka ime ụlọ ọ bụla. Emechara ya na lacquer lacquer na-acha ọcha, a na-ejikọ eriri ya ndị dị ọcha na chrome christ nke oge a. Designers hụrụ ya mfe mbuli elu.
Ihe omimi a na - eme ka ndi mmadu nwee obi uto. Igosiputa uzo di elu nke gha enyere gi aka zuru oke mgbe i na aru oru ma obu nuo iko kọfị, na ebe ezoro ezo di n'okpuru tebụl na ebe nchekwa dị n'okpuru tebụl nke na-eme ọmarịcha ọrụ a, ọ bara uru inwe!
YF-2001 Wepụ-Tebụl Kọfị Nke Na-eju Gị Anya n'Thezọ Kasị Mma Ga-ekwe Omume
Dị ka aha ya si dị, okpokoro kọfị anyị dị n'etiti narị afọ gara aga na-egosipụta mmapụta iji kpughee oghere nchekwa zoro ezo. A na-emeju ihe mkpuchi ukpa ya site na akwukwo marble maka uzo ozo di egwu - nke zuru oke maka ichota akwukwo n'oge ozo gi.